Author Topic: Su'aal: Waxa i xanuuno dhinaca midig ee feeraha? (Read 2317 times)
« on: March 08, 2016, 05:49:45 PM »
Waxaan weydiin lahàa doctors waxaa in muda eh i xanuunto dhinaca midin feeraha danbe kilada ka koreyso markaan fadhiisto bas hadaan istaago ama seexdo wax xanuun ma dareemo dhakhtar waan la xariiray waxaa laoga saaray mri scane dhakhtarkii waxuu dhahay waxbo ma qabtid mrka maxaa keeni karo xanuunkaas .
Re: Waxa i xanuuno dhinaca midig ee feeraha qeybta danbe oo kilida ka koreyso
« Reply #1 on: March 18, 2016, 12:00:34 PM »
Illaa goorma ayay ku xanuunaysay?
Qufac ma leedahay ama xanuun markaa hindhisto?
MRI scan-ka qeybtee jirka laga saaray ma feeraha ayay ahayd mise caloosha?
Miisaankaagau waa imisa?
Shaqadaadu fadhi miyay u badan tahay?
Da'daada waa meeqo?
Ma leedahay xanuunka gaaska, dibbiro markaa cunto cuntid ka dib?
Ma jiraan xanuuno kale ama daawo aad qaadatid? wax jug hore oo ku gaaray?
Xanuunka aad meeshaa ka dareemayo meel kale ma u gudbaa sida garabka midig oo kale.?
« Reply #2 on: April 10, 2016, 06:32:05 PM »
Da'deydu waa 20 jir dhinacaas bas ayaa i xanuunto meel kle uma gudbo xanuunka cudurka gaaska waa qabaa oo waxaan isku arkaan markaa cunto cuno caloosha ayaa hawo iga gasho oo waa daacsadaa xanuunkaan waxuu ihaaya ilaa 5 sano lkn marka qaar waan roonahy oo maalin walbo ima xanuunto markaa fadhiyo bas ayeyna i xanuunta hadaan istago ama aan seexdo xanuunka wuu dhamana wax qufacmisaankeygana. mri la isaaray waa tan dhinaca kabilaawato garabka ilaa lugta misaankeygana waa 71kg wax jug ehna iigama dhicin
Re: Su'aal: Waxa i xanuuno dhinaca midig ee feeraha?
« Reply #3 on: April 24, 2016, 04:17:20 PM »
Sida aad u faahfaahisay waxay u badan tahay murqo-kog (Muscle spasm) ka dhalayo qaab fadhigaaga ama cadaadis aad saarayso feera calaanta hoose, fadlan ku dadaal in fadhigaadu uu toosnaado, meesha ku xanuunaysane saliid xabad sowdo oo qandac ah ku daliig, wixii isbadal ahne ila soo socodsii.
Views: 2796 January 16, 2019, 01:53:17 PM
Views: 254634 December 05, 2018, 08:41:26 PM
Views: 10711 February 10, 2016, 03:35:36 PM
Views: 2287 November 16, 2018, 01:43:21 PM
Views: 3569 March 17, 2016, 12:37:16 PM